विश्वको सवैभन्दा सानो क्रिस्मस कार्ड - The world's smallest Christmas card -
पुस ५ –बेलायतका वैज्ञानिकहरुले विश्वको सवैभन्दा सानो क्रिस्मस कार्ड बनाएका छन् र यो कार्ड यति सानो छ की एउटा पोष्ट कार्डमा यस्ता २०० मिलियन कार्ड अटाउन सक्छन् ।
नेशनल फिजिकल ल्याबोरेटरी ( एनपिएल ) ले बनाएको उक्त कार्डलाई युकेको नेशनल मेजरमेन्ट स्ट्यान्डर्डस् ल्याबोरेटरीले १५ x २० माइक्रोमिटर भएको बताएको छ । एक माइक्रोमिटर एक मिटरको एक मिलियनौँ अंश हुन्छ । यो कार्ड सिलिकन नाइट्राइडमा प्लाटिनमको लेप लगाएर बनाइएको छ आयोन बिमको केन्द्रिकरणबाट यसलाई देखाइएको थियो । यसको बाहिरी सतहमा स्नोम्यानमा सिजन्स ग्रिटिंस लेखिएको छ भने भित्र सिजनल सन्देश पनि राखिएको छ ।
आफ्ना सहकर्मी डा. किन मिनगार्डसंग मिलेर कार्ड बनाएका एनपिएलका डा. डेभिड कक्सले यसमा प्रयोग गरिएको प्रविधिका धेरै व्यवहारिक उपयोगिता रहेको बताए । यस प्रविधिलाई वस्तुहरुमा रहेका निकै साना कणहरुको चौडाइ मापन गर्न प्रयोग गरिरहेको र यसले नयाँ ब्याट्री र सेमीकण्डक्टर प्रविधिका लागि सहयोग गर्ने उनले बताए ।
एनपिएलले यसअघिको क्रिस्मस कार्डको मापन २०० x २०९ माइक्रोमिटर रहेको र अहिलेको कार्ड त्यसभन्दा १०० गुणा सानो रहेको बताए ।